Miady ny toerana ny G-toerana? Tena avo intsony ny fotoana izay nanenjika ny mirage sy hifantoka amin'ny firaisana ara-nofo ara-pahasalamana manana ny fiainana miaraka amin'ny mpiara-miasa.
Misy an-tapitrisany ny vehivavy ho izay ny mikatsaka ny saro-pantarina G-toerana dia tsy nifarana orgasms. Vehivavy te ho endriky ny levitra izany na dia eo aza ny miaina tanteraka clitoral orgasms.
Marina fa fivaviana orgasms matetika mafy kokoa noho ny orgasms tratra amin'ny alalan'ny clitoral tairina; na izany aza, ny orgasms mahazo ny maro an'isa ny vehivavy dia clitoral eo amin'ny natiora.
Raha tsy misy zavatra ratsy ao amin'ny manana orgasms tsy amin'ny alalan'ny clitoral tairina, ny angano mifandray amin'ny G-toerana ambany vokatry sarotra sy mihena firaisana ara-nofo tena sarobidy eo amin'ny vehivavy, izay tsy hahatratra ny be niresaka momba ny G-toerana levitra. Ny zavatra mampihomehy vitsivitsy mpikaroka eto dia ny hoe mbola tsy matoky ny fisian'ny ny G-toerana.
G-toerana na Grafenberg nahazo toerana ny anarany ao amin'ny dokotera alemà Dr. Ernst Grafenberg, izay niresaka voalohany momba io ao anatin'ny faritra manaitaitra ny fivaviana, akaiky ny urethra lalana miverina any amin'ny taona 1950. Mihoatra ny 60 taona izay no lasa hatramin'ny soso-kevitra no nataon'ny dokotera alemà, saingy mbola tsy misy porofo mazava ny G-toerana ny fisian'ny, izay nanery ny maro ny mino fa angano fotsiny.
A vao haingana fianarana nivoaka tao amin'ny gazety ara-pitsaboana Clinical Anatomy toa manana nony farany busted ny angano manodidina ny G-toerana. Araka ny fandinihana, ny hevitra avokoa ny nizarany orgasms ho any G-toerana-Nandrisika, fivaviana sy ny clitoral dia tena ratsy. Mpikaroka nandray anjara tamin'ny fanadihadiana nilaza fa ny hany teny izay tokony ampiasaina karazana orgasms rehetra niaina ny vehivavy dia “vavy levitra”.
Nandritra ny hoe fianarana, sexologists tonga ny mahafantatra fa “anatiny clitoris”, izay ny daty no nino ny miteraka fivaviana orgasms, dia angano fotsiny. Clitoris dia ivelany taova ary dia manana anjara lehibe eo amin'ny fanomezana fahafinaretana amin'ny alalan'ny vehivavy be levitra; dia izay.
Tsy maintsy efa nandre ny olona milaza fa ati-doha no lehibe indrindra taova firaisana ara-nofo olombelona. Io fianarana vaovao ihany koa ny milaza zavatra toy izany koa. Araka ny fandinihana, vehivavy orgasms matetika ara-tsaina.
Ny mpahay siansa nahita fa ny firaisana ara-nofo mahafa-po ny vehivavy dia foana mifototra amin'ny fivaviana levitra. Izany no tsara; fa ny vehivavy tsy maintsy hahatakatra fa vokatry ny manana sarotra kokoa ny vatana, izy ireo tsy afaka ny hanana orgasms mora toy ny olona. Koa, dia tokony tsy hahatsapa ambany fotsiny satria mahomby mba hahatratra levitra fotsiny amin'ny alalan'ny fidirana.
Eny, ianao hihaona vehivavy izay milaza fa foana orgasms miaina araka ny G-toerana vokany namely fotoana vitsivitsy. Mety tsy mandainga; na izany aza, manam-pahaizana mino ny zavatra hitako ny vehivavy toy ny G-toerana tairina no ankapobeny ny ivelany maintsy tairina izy ireo tsy nahy.
Tsy maintsy ho manontany tena ny antony tsy mahatsapa toy izany koa. Ankehitriny, izay misy ny fifandraisan'ny fanontaniana; fanazavana lojika indrindra mety ho hafa amin'ny fomba hafa ny fihetsiky ny vatana manokana handrisika.
Tsy mety ho fanazavana siantifika kokoa, fa nahoana no manao zavatra sarotra kokoa. Arakaraka ianao mieritreritra ny ambany no ho ny fahafaham-po quotient; izany, miala voly fotsiny sy mankafy firaisana ara-nofo.